Wednesday August 05, 2020 - 20:23:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo iyo qaraxyo khasaara badan dhaliyay oo maanta ka dhacay deegaanno hoos yimaad magaalada Baydhaba ee gobolka Baay.
Col.Aadan Xasan Booroow waxaa lagu dilay daynuunaay
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada dowladda Federaalka iyo maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Koonfur galbeed kasoo gaaray weeraro culus oo lagula beegsaday deegaanka Daynuunaay iyo duleedka Baydhabo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerar maanta barqadii ciidamo gurmad u ahaa Daynunaay lagula beegsaday afaafka hore ee Baydhabo uu dhaliyay khasaara aad uxooggan.
War rasmi ah oo kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in weerar isugu jiray dhabbagal iyo qaraxyo lagu dilay ugu yaraan 14 askari oo ay kamid ahaayeen saraakiil sarsare.
Taliyihii guutada 8aad qeybta 60aad ee ciidamada dowladda Jeneraal Max'med Isxaaq Xasan ayaa kamid ahaa saraakiishii lagu dilay dagaalka, sidoo kale waxaa qaraxyo dhowr ah lagu gubay gaari Cabdi Bile ah iyo gaari Ambalaas ah oo gurmad ahaan ugasoo baxay Baydhabo.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Al Shabaab ay dagaalkii maanta ku dileen Laba Xidigle Cabdi Caziiz oo ahaa taliye ku xigeenka guutada 8aad ee ciidamada dowladda qeybta lixaad.
Dagaalladii maanta ka dhacay duleedyada magaalada Baydhabo ayaa si xun loogu jebiyay maleeshiyaadka maamulka Koonfur galbeed iyo ciidamo daacad u ahaa dowladda Farmaajo.
Sidoo kale weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay saldhigga Daynuunaay waxaa ku dhintay Col.Aadan Xasan Booroow oo kamid ahaa saraakiisha ugu sarraysa ciidamada maamulka Cabdi Caziiz Laftageern.